Ngwuputa ugwo na Swipely | Blog MarTech
Gbanwee Nhazi Kaadị Ebe Azụmaahịa
Tuesday, June 26, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Swipip awade ụlọ ọrụ a ugwo ahia ahia. Na isi, ahia ịkwụ ụgwọ bụ nka nke na-achọ ọnọdụ sitere na data zoro n'etiti azụmahịa nke ụlọ ọrụ ahụ. Site na iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa n'oge dị ala, ọ na-eme ka ọ dị mfe ịchọta ụzọ zoro ezo iji jikọọ na ha site na iji data ịkwụ ụgwọ ha.
Ndị ụlọ ọrụ na-agbanwe n'elu ikpo okwu Swipely nwere ike ịga n'ihu ịhazi ịkwụ ụgwọ dị ka ọ dị na mbụ, ebe injin Swipely na-egwupụta data na-abịa yana azụmahịa dị otú ahụ iji mepụta usoro na nghọta nyocha ndị ọzọ. Swipely na-enyekwa akara ngosi nke ụlọ ọrụ, na-enyere aka iji atụnyere.
A naghị agbagha mkpa ọ dị itinye ndị ahịa aka. Na Swipely, ndị ahịa na-ezigara ndị ahịa ozi zubere ozugbo. Dịka ọmụmaatụ, ikpo okwu na-achọpụta onye ahịa ọhụrụ ma zipụ ozi nnabata. Ọ na-apụ ozi ekele gị mgbe emechara otu ire ere. Injin ahụ na-ewepụta data kaadị akwụmụgwọ iji gosipụta ndị na-azụghị ahịa, kwuo ụbọchị 90, ma nye ahịa ahụ ohere izigara ha ozi pụrụ iche.
Ezigbo uru, dị ka mgbe niile, dabere n'otú ndị ahịa na-ahọrọ iji ụdị ọrụ a. Iji maa atụ, ọ dị mfe Daalụ ozi nwere ike ịchọta ụzọ ya na folda junk ngwa ngwa. Ma, a Daalụ sochiri aro maka ịzụrụ ọhụụ, yana onyinye pụrụ iche atụbara ga-abụ ndị ahịa nwere mmasị.
Ọzọkwa, ndị na-ere ahịa nwere ike ịnweta data kaadị akwụmụgwọ iji chọpụta ndị ahịa oge niile ma mee mmemme iguzosi ike n'ihe jikọtara na ọwa ịkwụ ụgwọ, na-achọghị ka ndị ọzọ nwee ike ijikwa otu, wepụta kaadị iguzosi ike n'ihe dị iche iche, ma ọ bụ ndị na-azụ ndị ọrụ itinye aka na ịkwụ ụgwọ ahịa.
Ego ole bụ Swipely? Jiri ha ọnụahịa engine iji chọpụta ihe ndị na-eri bụ - ha na-ekwu na ọ bụghị ihe karịrị gị ahụkarị ịkwụ ụgwọ nhazi ụgwọ.
Swipely ewerela ọrụ ahụ na nke ha ọrụ ụgwọ ọrụ ndị ahịa. Ndị ahịa na-edeba aha kaadị akwụmụgwọ ha ma ha amalite ma na-agba ọsọ… enweghị kaadị iguzosi ike n'ihe, akara mkpado ụzọ, ma ọ bụ nọmba ndị otu iji cheta!
Tags: kaadịnhazi kaadị akwụmụgwọugwo ahiaugwo nhaziswipip
Trackur: Mfe, Ike Reputation Monitoring
Nzọụkwụ iji mepụta Facebook Page